गणेश लामाको राजनीतिक उचाई थप बढाईदिए मनाङ्गेले ! – मिलिजुली खबर
गणेश लामाको राजनीतिक उचाई थप बढाईदिए मनाङ्गेले !
काभ्रेका गणेश लामा राजनीतिक पृष्ठभूमिका होईन् । लामालाई धेरैले चिन्ने ‘डन, गुण्डा’ नाईके भनेर नै हो । उनको परिचय यसैमा बनिसक्यो ।
लामालाई धेरैले सालिन डनको रूपमा पनि लिन्छन् । उनको ब्यक्तिगत पृष्ठभूमि राजनीतिक नहोला तर उनको संगत पर्याप्त मात्रामा नेपालका उच्च ओहोदाका राजनीतिक दलका नेतासंग हुने गरेको कुरा छिपाएर छिपाउन मिल्दैन ।
लामा, बिजय कुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरू गरे । काभ्रेकै भैकन राम्रोसंग भुगोल नघुमेका लामालाई सुरू सुरूमा अप्ठ्यारो हुनु स्वाभाविक पनि थियो । ‘सोझो औँलाले घिउ’ आउँदैन भने झै राजनीतिमा अनेक फण्डा र टिकदम हुन्छ । जतिबेला यी कुरामा लामा अभ्यस्त भै सकेका थिएनन् ।
पछि फोरम नेपाली कांग्रेससंग विलय भयो । गणेश लामा देशकै ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी कांग्रेसको नेता बने । अघिल्लो चुनावमा काभ्रे संघीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश सभा (ख) का लागि नेपाली कांग्रेसबाट टिकट ल्याए । निर्वाचनमा होमिए । लामालाई त्यति बेलाको एमाले माओवादी गठबन्धनले मुख्य प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा लियो ।
त्यो निर्वाचनमा उनी लामा पराजित भए । तर पनि उनी विजयी भएका नेता जतिकै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिरेहेका हुन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ताको विवाह, प्रबन्ध, छेवार, पास्नी होस वा मर्दा मलामी पुगिरसेकै हुन्छन् ।
लामाले विस्तारै आफुलाई राजनीतिमा अब्बल बनाउँदै लगिरहेका छन् । यसै क्रममा गण्डकी प्रदेशका लाखि जेठ २६ गते एउटा ऐतिहासिक दिन थियो । मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सदनमा विश्वासको मद लिँदै थिए । गणेश लामा पोखरा हानिए । मतदान हुने अघिल्लो दिन नै लामाले मुख्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङको मन्त्री मण्डलमा रहेका दिपक मनाङ्गेलाई भेटे ।
मतदान गर्न सदनमा मनाङ्गे गएनन् । मनाङ्गे नजाने वित्तिकै मुख्य मन्त्री गुरूङ अल्पमतमा परे । सरकार ढल्यो । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भै सक्यो ।
मनाङ्गे र लामाको पृष्ठभूमि मिल्छ । कुनै बेला काठमाडौँमा उनीहरू एकले अर्कोलाई सहयोग र सहकार्य गर्ने कुरा पनि आइरहन्छ । त्यसैको आधारमा मनाङ्गेलाई प्रभावित पार्न सफल भए कांग्रेस नेता गणेश लामा । उने मनाङ्गेलाई सदन नजाने अवस्थाको सिर्जना गरे ।
भलै मनाङ्गे सदनमा नपठाए बापत प्र हरीले लामा प क्राउ गर्यो । केहि घण्टा चौ कीमा राख्यो । तर यसले गणेश लामाको राजनीतिक उचाई बढाईदिएको छ । अब उनको सिधा कुराकानी पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवासंग हुनेछ । लामाले जुन भूमिका निर्वाह गरे त्यसैको बाबजुद गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रकिया अघि बढेको छ ।
केहि घण्टा लामा प्र हरी हिरातमा बसेपनि आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अझ बलियो बनाउन सफल भए । मनाङ्गेको साथले अब लामालाई नेताहरू ‘डिलिङ पावर’ बढाइदिएको छ । लामा पोखरा पुगेर मनाङ्गेलाई आफ्नो पञ्जामा पार्न नसकेको र प्र हरी हिरासतमा बस्नु परेको भए अर्कै अर्थ लाग्थो । तर लामालाई मनाङ्गेले साथ दिए । आफ्नो राजनीतिको सदूर यात्रा लामाले तय गरे ।
काभ्रे कांग्रेसको राजनीतिमा पनि उनले अब बलियो छाप छोड्ने छन् । किन कि अहिले उनलाई अर्को पार्टीबाट आएर छिट्टै अवसर लिएको भन्दै लामो समय कांग्रेसमा योगदान गरेकाहरूले राम्रो दृष्टिले हेर्दैनन् । अब उनीहरूको दृष्टिमा पनि केहि फेरबदल आउने निश्चित छ ।
यी हुन्, पुर्ब मन्त्री बाँस्कोटाको पहलमा मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका लागि परेका योजना
पात्लेखेतको हनुमान माविमा थप दुई कोठे भवन शिलान्यास